မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၅)နှစ်ပြည့်လေးမှာ နွေးထွေးကြင်နာမှုတွေပါတဲ့ စာသားလေးတွေနဲ့ မိန်းမဖြစ်သူကို ဆုံးမလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ခ) ကျားပေါက်.. – Daily News
မင်္ဂလာသက်တမ်း (၁၅)နှစ်ပြည့်လေးမှာ နွေးထွေးကြင်နာမှုတွေပါတဲ့ စာသားလေးတွေနဲ့ မိန်းမဖြစ်သူကို ဆုံးမလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ခ) ကျားပေါက်..
October 29, 2021 - by admm
ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင် (ကိုက်ား) တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးက အဆိုတော် ကိုကျားတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၁၅) နှစ်ပြည့် ရက်မြတ်နေ့ရက်လေးပါ။
ကိုက်ားကေတာ့ ဒီနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးအတွက်ကို သူ့ရဲလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ချစ်ဇနီးလေး အချစ်ပိုရအောင် Happy 15th anniversary Zone ၊ လိမ္မာပါ ၊လူကြီးဆန်ပါ၊ Hope well haveabetter future soon. ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျားပေါက်က ခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ သွေးမအေး ဒူးမထောက်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့် တော်လှန်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်နေပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက် တော်လှန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ကျားပေါက်ရဲ့ Doodle Art ဖန်တီးမှုနဲ့ Ukulele ဂစ်တာလေးကလည်း အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,၅၀၀ နဲ့ ကမ္ဘာ့လေလံအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ကျားပေါက်ကိုယ်တိုင်ရော ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကလည်း ဂုဏ်ယူနေခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်ျဂလာသကျတမျး (၁၅)နှဈပွညျ့လေးမှာ နှေးထှေးကွငျနာမှုတှပေါတဲ့ စာသားလေးတှနေဲ့ မိနျးမဖွဈသူကို ဆုံးမလိုကျတဲ့ အဆိုတျော ဟနျထူးလှငျ (ခ) ကြားပေါကျ..
ဒီနအေ့ောကျတိုဘာလ (၂၉)ရကျနလေ့ေးကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော အဆိုတျောဟနျထူးလှငျ (ကိုကျား) တို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ မင်ျဂလာနှဈပတျလညျကရြောကျတဲ့ နရေ့ကျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးက အဆိုတျော ကိုကြားတို့ ဇနီးမောငျနှံရဲ့ မင်ျဂလာနှဈပတျလညျ (၁၅) နှဈပွညျ့ ရကျမွတျနရေ့ကျလေးပါ။
ကိုကျားကတော့ ဒီနမေ့င်ျဂလာနှဈပတျလညျနလေ့ေးအတှကျကို သူ့ရဲလူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ခဈြဇနီးလေး အခဈြပိုရအောငျ Happy 15th anniversary Zone ၊ လိမ်မာပါ ၊လူကွီးဆနျပါ၊ Hope well haveabetter future soon. ဆိုပွီး ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ကြားပေါကျက ခုလကျရှိ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနအေရပျရပျမှာ သှေးမအေး ဒူးမထောကျဘဲ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ တျောလှနျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲမှာလညျး ထိပျဆုံးကပါဝငျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ လှတျမွောကျနယျမွမှော ရောကျနပွေီး စဈအာဏာရှငျကိုဆကျလကျ တျောလှနျနဆေဲဖွဈပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၇ ရကျနကေ့ ကြားပေါကျရဲ့ Doodle Art ဖနျတီးမှုနဲ့ Ukulele ဂဈတာလေးကလညျး အခြိနျတိုလေးအတှငျးမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၇,၅၀၀ နဲ့ ကမ်ဘာ့လလေံအမွငျ့ဆုံးအောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ကြားပေါကျကိုယျတိုငျရော ပရိသတျတှအေကုနျလုံးကလညျး ဂုဏျယူနခေဲ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Previous Article အတန်းထဲကငပြောင်တွေဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ အထက်မြက်ဆုံးသူဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိ
Next Article အိမ်လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွေးစရာမရှိလို့ သန်း 200 တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖခင်ရဲ့ အိမ်မွေးငါးကို ဖမ်းပြီး ကင်စားလိုက်တဲ့ ကောင်လေး